Freshworks: Multiple Shanduko Rate Optimization Module mune Imwe Suite | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 30, 2018 China, November 5, 2020 Arvind Parthiban
Mune ino nguva yedhijitari, iyo yekushambadzira nzvimbo yatama online. Iine vanhu vazhinji online, kunyorera uye kutengesa vatama kubva kune yavo yechinyakare nzvimbo kune yavo nyowani, yedhijitari. Mawebhusaiti anofanirwa kunge ari pamutambo wavo wakanakisa uye vanofunga nezve dhizaini saiti uye ruzivo rwevashandisi. Nekuda kweizvozvo, mawebhusaiti ave akakosha pamari yemakambani.
Tichifunga nezvechiitiko ichi, zviri nyore kuona kuti sei chiyero chekushandura optimization, kana CRO sekuzivikanwa kwayo, chave chombo chakakosha mune chero hunyanzvi hwevatengesi ve tech-savvy. CRO inogona kugadzira kana kutyora kuvapo kwekambani padandemutande uye zano.
Maturusi mazhinji eCRO anowanikwa pamusika. Dambudziko, zvisinei, nderekuti CRO ichiri kushanda. Evhangeri mune tekinoroji haina kuratidzwa munzira yatinoita nayo shanduko yekuwedzera optimization.
Shanduko yehuwandu hwekugadzirisa ibasa rakaoma. Heino mamiriro chaiwo:
Mutengesi anotanga kuisa peji pamwe nechokushandisa. Ane kofi uye anotarisa maemail ake sezvo peji racho rinotakura. Ipapo, inotanga kuita shanduko papeji. Uye zvino anofanira kutora rubatsiro rwechikwata chake chehunyanzvi kuti achinje pawebhusaiti yake. Uyezve, anoita bvunzo kuti aone kana zvese zvinhu zviri papeji zvakaiswa kune zvazvakanakira. Kana zvisiri, anotanga zvakare, chaipo kubva kurodha peji, uye ane imwe kofi. Kuzviisa pachena, iye achiri akanamira neyakajairika iyo yakazoteedzerwa pakagadziriswa webhusaiti - Uye ndizvo zvatakaita isu tese. Iko hakuna kumbove neakakosha hunyanzvi muCRO, zvinoshamisa zvakakwana.
Nekudaro, Freshworks ine mhinduro. Freshmarketer .
Makambani anotarisa kugadzirisa saiti yavo yekushandurwa mitengo yagara ichifanirwa kuvimba neyakavhiringika yakawanda yemamamojimendi akasiyana siyana kuzadzisa zvinangwa zvavo, uye kutenga akawanda software zvigadzirwa kune imwechete mushandirapamwe - Chinhu Chimwe chiratidzo chinotsvaga kutsvaga kugadzirisa nekupa akawanda ekugadzirisa ma module mune imwechete software chigadzirwa. , nekudaro kubvisa kudiwa kwekutarisa chero kumberi kupedzisa maitiro.
Mune mamwe mazwi, kuguma-kumagumo kugadzirisa iko zvino kwave kugona, uchishandisa imwechete software chigadzirwa - inonzi iyo CRO Suite. Chikwata cheFreshmarketer chinoda kufunga nezvekushandurwa senge cyclical maitiro pane kuita mutsara, uko data kubva kumawebhusaiti rinopa ruzivo, urwo iwe rwaunoshandisa kuvaka fungidziro, iyo yaunoshandisa sehwaro hwekugadzirisa, izvo zvinopa mamwe data - Uye anotevera maround yekutenderera inotevera.
Mhinduro yakasarudzika yeFreshmarketer iri mune yayo Chrome plugin, uye mune yayo yese-mu-imwe shanduko suite. Iyo indasitiri-yekutanga Chrome plugin yaita kuti zvive nyore kwazvo kuyedza uye kugadzirisa mapeji ekubuda, ayo aimbove asiri pamiganhu. Zvishandiso zvekugadzirisa zvechinyakare zvaive zvishoma nekuti ivo vaida kuti vashandisi vatakure mapeji avo kuburikidza neimwe saiti. Izvi zvakakonzera njodzi dzekuchengetedza uye zvakare zvaireva kuti maturusi aya aive nemipimo mikuru pane zvavaigona kuita. Nekudaro, timu yaFreshmarketer yakapfuura zvese izvi zvisingakwanisike. Yayo yese-mu-imwe shanduko suite inosanganisira Heatmaps, Kuongorora kweA / B, uye Kuongorora kweFunnel pamwechete.
Hezvino zvinhu zvinotonhorera zvaunogona kuita neFreshmarketer:
Gadzirisa uye bvunzo mapeji kubva kubhurawuza rako, ne Freshmarketer's Chrome plugin.
Wona mhenyu data data - Ruzivo rwekuti uye kana kusangana kuchiitika. Hapasisinazve zvinyorwa.
Shandisa akawanda ane simba CRO module nechigadzirwa chimwe chete.
Tevera kubaya pane zvinofambidzana webhusaiti zvinhu.
Gadzirisa ma URL zvirinyore, nerubatsiro rudiki kubva kune yako tech timu.
tora mhinduro dzakabatana paunomhanya wega ma module. Kusanganisira kuyedza kweA / B nemapombi akavakirwa-mukati.
Freshmarketer yakakurudzirwa optimization kutenderera maitiro anotanga nefunnel ongororo. Kuongorora kwemafaro ndiko kunoiswa seti yemapeji anoshanda senzira yekushandura anoedzwa kuti aone uko vashanyi vanodonha kubva mufanera. Izvi zvinobatsira iwe kuti uzive mashandiro anoita vashanyi mune yakakura mamiriro ekutendeuka.
Tevere, iwe pfuurira mberi kushandisa heatmaps, ayo akabatanidzwa nefanera ongororo. Heathermaps ndiwo graphical anomiririra akaunganidzwa peji tinya data. Ivo vanokuratidza iwe webhusaiti zvinhu zvinoita zvisina kunaka, uye ndezvipi zvikamu zvesaiti yako zvinoda kugadziriswa. Mushure mekudzidza apo vanosiya, unodzidza sei vanodonha.
Paunenge iwe waona ako asina kusimba zvinhu uye mapeji, iwe unogona ipapo kuenderera kune yekupedzisira nhanho - A / B kuyedza. Nekudaro, usati watanga kuyedza kweA / B, zvirinani kuumba yakasimba hypotheses yekuyedza. Hypotheses yeA / B bvunzo inofanirwa kunge yakavakirwa pane zvawakanzwisisa kubva pabvunzo dzako dzakapfuura. A / B kuyedza ndiko kunoitwa shanduko kune peji, uye chengetwa seyakasiyana. Vashanyi traffic yakakamurwa pakati pezvakasiyana izvi, uye iyo ine nani kutendeuka 'kukunda'.
Uye kana iwe uchinge wasara neyakanakisa vhezheni yako saiti, iwe unotanga iyo kutenderera zvakare zvakare!
Isu takashandisa Freshmarketer pane yedu kusaina peji, tichigadzira tweaks kwairi zvichibva pane fungidziro dzakagadzirwa nedata rakaunganidzwa uchishandisa Freshmarketer, iyo yakawedzera kusaina kumusoro ne26% mukati memazuva matatu. Shihab Muhammed, BU Musoro kuFreshdesk.
Zvinoenderana nezviongororwa uye kucherechedzwa nenyanzvi dzeindasitiri, huwandu hweshanduko hwekugadzirisa hwakagadzirira kuona kukura kukuru mumakore anotevera sezvo vatengesi vakawanda vachiwedzera kuisa kukosha paCRO mumishandirapamwe yavo. Tichifunga nezvekuita kwayo kwakawanda, nyore kushandisa, uye zvakasarudzika maficha, Freshmarketer yakaiswa zvakanaka kuti itore mukana wezviitiko zviri mumunda.
Freshmarketer inomiririra yekushanduka-shanduka maererano nemaitiro emakambani anokwenenzvera shanduko uye nekuona zvakadzika mukuita saiti. Funga nezvekufambira mberi kunonoka muindasitiri yedu uchienzaniswa neyemimhanzi indasitiri, iyo yakasimuka nekukurumidza kubva kumarekodhi kuenda kumaCD, kuPods, uye pakupedzisira, kuyerera. Yedu Chrome plugin ndiyo inotevera nhanho muCRO uye inomiririra iro ramangwana rekushandurwa kwehuwandu hwekugadzirisa, nekuda kwekuedza kwedu kuti iite isina musono uye inyatsoita nekubatanidza akasiyana ekushandura mamodule. Isu tinofungidzira kugamuchirwa nekukurumidza sekudiwa uye bhajeti yekushandura mwero wekugadzirisa unowedzera pasi rose. E-commerce uye SaaS mafemu anobva angoziva iwo mabhenefiti ekuti uve neyako suite yeicho chaicho-nguva yekudhiraivha inosanganiswa neA / B uye kuyedzwa kwefunnel.
Edza Freshmarketer mahara
Tags: ab testchrome pluginkutendeuka optimizationchiyero chekushandura optimizationcrocro suitenewmarketernewworksfanera ongororogoogle Chromegoogle chrome pluginkupisa mepumamapu ekupisakupisa mepuheatmapsrarama data rekuzivisararama data dataoptimizationkupatsanura URL kuyedzwatrack kudzvanyazarget
Arvind ndiye CEO & co-muvambi we Zarget, uko mukuwedzera pakufungidzira chiratidzo chekambani uye kuongorora nzira yekuita kuzadzisa zvinangwa zvavo, parizvino anotungamira kushambadzira kwechigadzirwa, presales uye mashandiro ekutengesa. Aimbova mushandi weZoho kwaakatungamira kushambadzira kwechigadzirwa cheITSM suite yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, Arvind akawana ruzivo rwakakosha muiyo SaaS indasitiri uye zvese 'Kushambadzira'. Arvind anotora kubva paupfumi hwake hwakawanda hwechiitiko kuti asimbise zvikamu zvebhizinesi kumberi. Iye zvakare anofa-zvakaoma fan weChelsea.
Chinja: Mobile App Kushambadzira Kuyera uye Kubiridzira Kudzivirira Platform